ကားရှေ့မီးကြီးနဲ့ ဝါယာရှော့ အန္တရာယ် | CarsDB
မီးလုံးတွေကို ကြည့်တော့ H4 မီးသီး အမျိုးအစား 130/100W တွေသုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကားပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးကို ဘာလုပ်ထားလဲ မေးကြည့်တော့တခြားဝပ်ရှော့ တစ်ခုမှာ ကားရှေ့မီးကြီး အလင်းမှိန်တာ သွားပြတော့ watt များတဲ့ မီးသီးလဲပေးလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
“အမ ကားရှေ့မီးကြီးက ပုံမှန်အားဖြင့် 55 watt လောက်ပဲရှိတဲ့ မီးသီးတွေနဲ့လာပါတယ်၊ အဲဒါကို မီးမှိန်တယ်ဆိုပြီး watt ပိုများတဲ့ 100 W မီးသီးတွေကို ဒီအတိုင်းအစားထိုးလိုက်လို့မရပါဘူး။ ဒီအတိုင်း အစားထိုးထည့်လိုက်ရင် အခုလိုပဲ sockets တွေလောင်မယ်၊ ပြီးရင် ဝါယာကြိုးတွေပူလာပြီး ဝါယာရှော့ဖြစ်နိုင် မီးလောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမကားအရှေ့ မီးပိုလင်းချင်တယ်၊ မီးအားမြင့်တာ သုံးမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ relay ထုပ် ခံသုံးမှရပါမယ်“ ဆိုပြီး ရှင်းပြရပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကားပိုင်ရှင် အမက ဘာဖြစ်လို့ relay ထုပ် ခံသုံးရတာလည်း ပြန်မေးတာနဲ့ ကျနော်လည်းရှင်းပြရပါတယ်။
Relay ထုပ်ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာလို့သုံးရတာလဲ?
ကျနော်တို့ကားလောကမှာ ကားရှေ့မီးကြီးတွေ အားနည်းလို့ ကားမီးလုံးတွေကို watt များတာထည့်တယ်။ တော်တော်များများက ဒီအတိုင်း ထည့်တတ်ကြလို့ အခုလို socket တွေမီးလောင်၊ ဝါယာတွေလောင်ပြီး မီးမလင်းတော့မှ ဝပ်ရှော့ရောက်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဝပ်ရှော့ ရောက်လာမှ ဒီအတိုင်းထည့်မရဘူး။ Relay ထုပ် ခံသုံးရမယ်ဆိုတော့မှ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ သိချင်ကြပါတယ်။
ကားလောက က ကောင်းမောင်းသူ တော်တော်များများ relay ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ကားရဲ့ electrical နဲ့ electronic ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ relay ဆိုတာဟာ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။
Relay ဆိုတာက လက်ဆင့်ကမ်းတယ်ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကလာတာပါ။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်တွေ/အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ ထဲမှာပါတဲ့ တုတ်ချောင်းလေးကို ကိုင် တစ်ယောက်က ပြေး၊ နောက်တစ်ယောက်ဆီ လက်ဆင့်ကမ်း၊ အဲဒီတစ်ယောက်က တုတ်ချောင်းလေးကို ကိုင်ပြီး ပြေး၊ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ဆီပြေးရတဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းပြေးပွဲမျိုးကို Relay လို့ခေါ်ပါတယ်။
အခု relay ဆိုတာကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး နားလည်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ relay ဆိုတာ လျှပ်စစ်အားတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်သုံး ခလုတ်လေးတစ်ခုပါပဲ။
Relay တစ်လုံးကိုဘာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုရင်တော့ relay ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ သံလိုက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ coil တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ နောက် relay တစ်လုံးကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းအဖြစ်မြင်နိုင်ပြီး အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာကတော့ သံလိုက်ဖြစ်ပေါ်စေရန် coil ကို power supply ပေးရမယ့် အပိုင်းရယ်၊ သံလိုက်ဖြစ်လာတဲ့ အခါအဲဒီ relay အတွင်းမှာရှိတဲ့ relay point တွေကို ထိကပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားတွေကို by pass သဘောမျိုး လမ်းလွှဲ ဖွင့်ပေးနိုင်/ပိတ်ပေးနိုင်တဲ့ အပိုင်းဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အခုကျနော်တို့ ကားမီးကြီးတွေကို watt ပိုများတာ သုံးချင်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ relay ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုယူပြီး အသုံးချထားတာပါ။
ကားအနိမ့်မီး၊ အမြင့်မီး စတဲ့ low beam ၊ high beam တွေကို ကားကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်လုပ်လိုက်ကတည်းက သူကားနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ watt rating တွေ သတ်မှတ်ပြီးထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီကားမီးကို သွယ်တန်းထားတဲ့ ဝါယာကြိုးတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်၊ ကားမီးသီးတပ်ဆင်အသုံးပြုမယ့် socket တွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်တွေကို တစ်ခါတည်း အလိုအပိုမရှိ တွက်ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါ ကားတွေဟာ အသုံးပြုထားတာ ကြာပြီဖြစ်လို့ရယ်၊ ဝါယာရိန်းတွေရဲ့ ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ရယ်၊ တချို့ကားမီး အလှဆင်သူတွေရဲ့ ဝါယာကြိုးတွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်သွယ်တန်းမှုတွေရယ်၊ ကားမီးခွက်တွေရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလျော့ကျလာတာကြောင့်ရယ် အခု မော်ဒယ်နိမ့်ကားတော်တော်များများ ညပိုင်းမောင်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ကားမီးက သူများကားမီးနဲ့ ယှဉ်ထိုးရင် မမြင်ရဘဲ ကားမီး မှိန်တယ်၊ ကားမီးလင်းအားကောင်းတာထည့်မယ် ဆိုတာတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကားမီးသီးတွေကို ဒီအတိုင်းအလွယ်တပ်ဆင်ပြီး watt rating တွေထည့်မတွက်လို့ အခုလို socket တွေမီးလောင်တာ၊ ကားဝါယာတွေ အပူလွန်ပြီး မီးလောင်မှုဖြစ်တာတွေ ဖြစ်လာရတာပါ။ ကားမီးသီးတွေမှာ ရေးထားတဲ့ watt ဆိုတာက power ရဲ့ ယူနစ်တစ်ခုပါ။
P (power) = V (voltage) * I (current) < watt> ဆိုပြီး ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်းလောက်မှာ သင်ဖူးတာ မှတ်မိကြမှာပါ။
ကားလေးတွေမှာသုံးတဲ့ ဘထ္ထရီ 12 V ကို အသေထားပြီး တွက်မယ်ဆိုရင် watt များတဲ့ မီးသီးတွေ သုံးလေလေ၊ current များများ သုံးစွဲရလေလေ၊ current များများ စီးဆင်းလေလေ အပူစွမ်းအင် များများဖြစ်ပေါ်လေလေပါပဲ။
Power (watt) များများသုံးလေ ပိုပူလေဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒါကြောင့် ဒီလို watt များတဲ့ မီးသီးတွေကို မူရင်း watt နည်းနည်းအတွက် တွက်ထုတ်ထားတဲ့ ဝါယာကြိုးတွေ၊ မီးသီး socket တွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုလို့ မရနိုင်တာပါပဲ။
ဒါကြောင့် relay ထုပ် တွေမှာ watt များများအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ဝါယာကြိုးတွေ၊ socket တွေကို အသုံးပြုပြီး ဘထ္ထရီကနေ လာတဲ့ မီးအားကို relay ကနေ တစ်ဆင့် မီးသီးဆီ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပြီး မီးအားမြှင့်ကြတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီလို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဝပ်များလို့ ဝါယာရှော့ ဖြစ်မှာတွေကိုပါ တစ်ခါတည်း ကာကွယ်ပြီးတဲ့ သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။
တချို့ ထင်သလို relay သုံးတယ်ဆိုတာ relay ထဲမှာ coil ပါလို့ မီးအားပိုများသွား၊ ပိုမြှင့်ပေးသွားတယ်ဆိုပြီး မှတ်သားထားတာတွေဟာ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။
ကျနော် ဖတ်ရှုလေ့လာဖူးသလောက် ကားမီးကြီး၊ ကားမီးသေး အသုံးပြုနည်းဆိုတာမျိုးကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက်တွေအရ ကားမီးသေးကို ညမှောင်ပြီဆိုတာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကိုက် ၂၀၀ အထိ မြင်နိုင်စွမ်းဖြစ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
ကားမီးသေးက လမ်းကို မြင်သာရုံသာ အောက်စိုက်ထားတဲ့ မီးဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ဖက်ယာဉ်မောင်းရဲ့ အမြင်အာရုံကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။
ကားမီးကြီးကိုတော့ လမ်းမီးမရှိတဲ့နေရာတွေ၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာတဲ့အချိန်၊ မြူနှင်းတွေကျချိန် တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း တစ်ဖက်ယာဉ်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ကားမီးကြီးသည် ကားရှေ့ ကိုက် ၃၅၀ ကနေ ၄၀၀ အထိမြင်နိုင်ပါတယ်။ ကားမီးကြီးသည် ကားမီးသေးထက် အလင်းရောင် ၂ ဆ ပိုလင်းပါတယ်။
အဓိကပြောချင်တာကတော့ လမ်းမီးအလင်းရောင်ရှိပြီး မြင်သာထင်သာတဲ့ နေရာတွေမှာ မီးအသေးကိုသာ သုံးပြီး တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောက ယာဉ်မောင်း အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် ကူညီပေးသင့်တာမျိုးပါ။
တစ်ဆက်တည်း ပြောချင်တာက အခုနောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာပါလာတဲ့ မီးကြီးတွေအကြောင်းပါ။ ဥပမာ Alphard တို့၊ Mark X တို့မှာပါတာမျိုးတွေပါ။ HID မီးသီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ အရှည်ကတော့ (High-Intensity Discharge) ပါ။ အဲဒီမီးလုံးတွေက လင်းအားအတော်ကောင်းပြီး ညဖက်မှာကြည့်ရင် အနီရောင် အဝါရောင် မဟုတ်ဘဲ အဖြူရောင် မီးသီးကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲဒီမီးသီးကြီးတွေ ကျွမ်းရင်၊ ပျက်ရင်၊ ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်လဲတာ ပြုပြင်တာမျိုး မလုပ်သင့်ကြောင်း တစ်ခါတည်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီမီးသီးတွေဟာ အများထင်သလို DC မီးသီးတွေမဟုတ်ဘဲ AC voltage နဲ့ အလုပ် လုပ်တာမလို့ပါပဲ။ ဒီကောင်တွေ အလုပ် လုပ်ဖို့ ဒီမီးသီးတွေရဲ့ မီးခွက်တွေ အောက်မှာ အရပ်ခေါ် ချုပ်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့ (AC to DC Converter) တွေ ပါ ပါတယ်။ လက်ရှိကား ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ D2R ၊ D2S ၊ D4R ၊ D4S အမျိုးအစားဆိုပြီး အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်။ ဒီမီးသီး ချုပ်ဘူးတွေက ထွက်တဲ့ဟာက high voltage ဖြစ်ပြီး ဓာတ်လိုက်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေရဲ့ မီးသီးတွေ ပြုပြင်မယ်ဆို မကျွမ်းကျင်ဘဲ အလွယ်တကူ ဖြုတ်တပ်တာတွေ စမ်းသပ်တာတွေ မလုပ်သင့်ကြောင်းပါ။
အခုလောက်ဆိုရင် ကားမီးမြှင့်မယ်ဆိုရင်၊ ဝပ်များတဲ့ မီးသီးတွေ သုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာရယ်၊ အရပ်ထဲမှာ အပြောများကြတဲ့ relay ခံသုံးတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်သုံးတယ်ဆိုတာရယ်ကို စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့ နားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကားနည်းပညာ ဗဟုသုတများကြွယ်ဝပြီး မိမိတို့ရဲ့ကားတွေမှာ ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်း အန္တရာယ်များ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းအကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
အမြိုးသမီး တဈဦးမောငျးတဲ့ Honda Fit ကားလေးတဈစီး ကားရှမေီ့းကွီး တဈဖကျမလာလို့ဆိုပွီး ကနြျောတို့ကားဝပျရှော့ ကို ရောကျလာတယျ။ ကားမီးဖှငျ့စဈဆေးကွညျ့လိုကျတော့ သူပွောတဲ့အတိုငျး ကားမီးက တဈဖကျမလာ။ ဒါနဲ့ မီးလုံးတှဖွေုတျစဈတော့ ကားမီးကွီး sockets တှဟော အပူလှနျပွီး လောငျထားတာ သှားတှပေ့ါတယျ။ ဒီလိုအဖွဈက အခုခတျေ လူစီးမြားတဲ့ Probox တို့၊ ဖငျကောကျတို့၊ နှားကွီး၊ နှားလေး၊ AD Van တို့၊ Honda Fit အစရှိတဲ့ ကားတျောတျောမြားမြားမှာ ဖွဈ့လဖွေ့ဈထရှိတဲ့ ပွဿနာတဈခုပါ။
မီးလုံးတှကေို ကွညျ့တော့ H4 မီးသီး အမြိုးအစား 130/100W တှသေုံးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒါနဲ့ ကားပိုငျရှငျ အမြိုးသမီးကို ဘာလုပျထားလဲ မေးကွညျ့တော့ တခွားဝပျရှော့ တဈခုမှာ ကားရှမေီ့းကွီး အလငျးမှိနျတာ သှားပွတော့ watt မြားတဲ့ မီးသီးလဲပေးလိုကျတယျလို့ပွောပါတယျ။
“အမ ကားရှမေီ့းကွီးက ပုံမှနျအားဖွငျ့ 55 watt လောကျပဲရှိတဲ့ မီးသီးတှနေဲ့လာပါတယျ၊ အဲဒါကို မီးမှိနျတယျဆိုပွီး watt ပိုမြားတဲ့ 100 W မီးသီးတှကေို ဒီအတိုငျးအစားထိုးလိုကျလို့မရပါဘူး။ ဒီအတိုငျး အစားထိုးထညျ့လိုကျရငျ အခုလိုပဲ sockets တှလေောငျမယျ၊ ပွီးရငျ ဝါယာကွိုးတှပေူလာပွီး ဝါယာရှော့ဖွဈနိုငျ မီးလောငျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမကားအရှေ့ မီးပိုလငျးခငျြတယျ၊ မီးအားမွငျ့တာ သုံးမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့ relay ထုပျ ခံသုံးမှရပါမယျ“ ဆိုပွီး ရှငျးပွရပါတယျ။
အဲဒါနဲ့ ကားပိုငျရှငျ အမက ဘာဖွဈလို့ relay ထုပျ ခံသုံးရတာလညျး ပွနျမေးတာနဲ့ ကနြျောလညျးရှငျးပွရပါတယျ။
Relay ထုပျဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာလို့သုံးရတာလဲ?
ကနြျောတို့ကားလောကမှာ ကားရှမေီ့းကွီးတှေ အားနညျးလို့ ကားမီးလုံးတှကေို watt မြားတာထညျ့တယျ။ တျောတျောမြားမြားက ဒီအတိုငျး ထညျ့တတျကွလို့ အခုလို socket တှမေီးလောငျ၊ ဝါယာတှလေောငျပွီး မီးမလငျးတော့မှ ဝပျရှော့ရောကျလာတတျကွပါတယျ။ ဝပျရှော့ ရောကျလာမှ ဒီအတိုငျးထညျ့မရဘူး။ Relay ထုပျ ခံသုံးရမယျဆိုတော့မှ ဘာဖွဈလို့လဲ၊ ဘာကွောငျ့လဲ သိခငျြကွပါတယျ။
ကားလောက က ကောငျးမောငျးသူ တျောတျောမြားမြား relay ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကွားဖူးကွမှာပါ။ ကားရဲ့ electrical နဲ့ electronic ပိုငျးဆိုငျရာတှမှော relay ဆိုတာဟာ မရှိမဖွဈအရေးပါတဲ့ ပစ်စညျးတဈခုပါပဲ။
Relay ဆိုတာက လကျဆငျ့ကမျးတယျဆိုတဲ့ အင်ျဂလိပျစာလုံးကလာတာပါ။ ကနြျောတို့ ငယျငယျက ရုပျရှငျတှေ/အားကစားပွိုငျပှဲတှေ ထဲမှာပါတဲ့ တုတျခြောငျးလေးကို ကိုငျ တဈယောကျက ပွေး၊ နောကျတဈယောကျဆီ လကျဆငျ့ကမျး၊ အဲဒီတဈယောကျက တုတျခြောငျးလေးကို ကိုငျပွီး ပွေး၊ နောကျဆုံး တဈယောကျဆီပွေးရတဲ့ လကျဆငျ့ကမျးပွေးပှဲမြိုးကို Relay လို့ချေါပါတယျ။
အခု relay ဆိုတာကလညျး ဒီအတိုငျးပါပဲ။ အလှယျကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှငျးဆုံး နားလညျအောငျပွောပွရမယျဆိုရငျတော့ relay ဆိုတာ လြှပျစဈအားတှကေို လကျဆငျ့ကမျးပေးတဲ့ လြှပျစဈသံလိုကျစှမျးအငျသုံး ခလုတျလေးတဈခုပါပဲ။
Relay တဈလုံးကိုဘာတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားလဲဆိုရငျတော့ relay ရဲ့အတှငျးပိုငျးမှာ လြှပျစဈဓာတျပေးလိုကျတာနဲ့ သံလိုကျဖွဈပျေါစနေိုငျတဲ့ coil တဈခုပါဝငျပါတယျ။ နောကျ relay တဈလုံးကို အပိုငျးနှဈပိုငျးအဖွဈမွငျနိုငျပွီး အပိုငျးတဈပိုငျးမှာကတော့ သံလိုကျဖွဈပျေါစရေနျ coil ကို power supply ပေးရမယျ့ အပိုငျးရယျ၊ သံလိုကျဖွဈလာတဲ့ အခါအဲဒီ relay အတှငျးမှာရှိတဲ့ relay point တှကေို ထိကပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ လြှပျစဈစှမျးအားတှကေို by pass သဘောမြိုး လမျးလှဲ ဖှငျ့ပေးနိုငျ/ပိတျပေးနိုငျတဲ့ အပိုငျးဆိုပွီး နှဈပိုငျးခှဲခွားထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး အခုကနြျောတို့ ကားမီးကွီးတှကေို watt ပိုမြားတာ သုံးခငျြတဲ့အခါမှာ အဲဒီ relay ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေိုယူပွီး အသုံးခထြားတာပါ။
ကားအနိမျ့မီး၊ အမွငျ့မီး စတဲ့ low beam ၊ high beam တှကေို ကားကုမ်ပဏီတှကေ ထုတျလုပျလိုကျကတညျးက သူကားနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ watt rating တှေ သတျမှတျပွီးထုတျပေးလိုကျတာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီကားမီးကို သှယျတနျးထားတဲ့ ဝါယာကွိုးတှရေဲ့ ခံနိုငျရညျ၊ ကားမီးသီးတပျဆငျအသုံးပွုမယျ့ socket တှရေဲ့ ခံနိုငျရညျတှကေို တဈခါတညျး အလိုအပိုမရှိ တှကျထညျ့ပေးလိုကျတာပါ။
ဒါပမေယျ့ ဒီကိုရောကျလာတဲ့အခါ ကားတှဟော အသုံးပွုထားတာ ကွာပွီဖွဈလို့ရယျ၊ ဝါယာရိနျးတှရေဲ့ ခြို့ယှငျးမှုကွောငျ့ရယျ၊ တခြို့ကားမီး အလှဆငျသူတှရေဲ့ ဝါယာကွိုးတှကေို ဖွတျညှပျကပျသှယျတနျးမှုတှရေယျ၊ ကားမီးခှကျတှရေဲ့ ကွညျလငျပွတျသားမှုလြော့ကလြာတာကွောငျ့ရယျ အခု မျောဒယျနိမျ့ကားတျောတျောမြားမြား ညပိုငျးမောငျးတဲ့အခါ ကိုယျ့ကားမီးက သူမြားကားမီးနဲ့ ယှဉျထိုးရငျ မမွငျရဘဲ ကားမီး မှိနျတယျ၊ ကားမီးလငျးအားကောငျးတာထညျ့မယျ ဆိုတာတှဖွေဈလာကွပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ကားမီးသီးတှကေို ဒီအတိုငျးအလှယျတပျဆငျပွီး watt rating တှထေညျ့မတှကျလို့ အခုလို socket တှမေီးလောငျတာ၊ ကားဝါယာတှေ အပူလှနျပွီး မီးလောငျမှုဖွဈတာတှေ ဖွဈလာရတာပါ။ ကားမီးသီးတှမှော ရေးထားတဲ့ watt ဆိုတာက power ရဲ့ ယူနဈတဈခုပါ။
P (power) = V (voltage) * I (current) < watt> ဆိုပွီး ကိုးတနျး၊ ဆယျတနျးလောကျမှာ သငျဖူးတာ မှတျမိကွမှာပါ။
ကားလေးတှမှောသုံးတဲ့ ဘထ်ထရီ 12 V ကို အသထေားပွီး တှကျမယျဆိုရငျ watt မြားတဲ့ မီးသီးတှေ သုံးလလေေ၊ current မြားမြား သုံးစှဲရလလေေ၊ current မြားမြား စီးဆငျးလလေေ အပူစှမျးအငျ မြားမြားဖွဈပျေါလလေပေါပဲ။
Power (watt) မြားမြားသုံးလေ ပိုပူလဆေိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလို watt မြားတဲ့ မီးသီးတှကေို မူရငျး watt နညျးနညျးအတှကျ တှကျထုတျထားတဲ့ ဝါယာကွိုးတှေ၊ မီးသီး socket တှမှော တပျဆငျအသုံးပွုလို့ မရနိုငျတာပါပဲ။
ဒါကွောငျ့ relay ထုပျ တှမှော watt မြားမြားအတှကျ ခံနိုငျရညျရှိတဲ့ ဝါယာကွိုးတှေ၊ socket တှကေို အသုံးပွုပွီး ဘထ်ထရီကနေ လာတဲ့ မီးအားကို relay ကနေ တဈဆငျ့ မီးသီးဆီ ခြိတျဆကျအသုံးပွုပွီး မီးအားမွှငျ့ကွတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီလို အသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့ ဝပျမြားလို့ ဝါယာရှော့ ဖွဈမှာတှကေိုပါ တဈခါတညျး ကာကှယျပွီးတဲ့ သဘောဖွဈသှားပါတယျ။
တခြို့ ထငျသလို relay သုံးတယျဆိုတာ relay ထဲမှာ coil ပါလို့ မီးအားပိုမြားသှား၊ ပိုမွှငျ့ပေးသှားတယျဆိုပွီး မှတျသားထားတာတှဟော မှားယှငျးနတေယျဆိုတာ သဘောပေါကျလောကျပွီထငျပါတယျ။
ကနြျော ဖတျရှုလလေ့ာဖူးသလောကျ ကားမီးကွီး၊ ကားမီးသေး အသုံးပွုနညျးဆိုတာမြိုးကလညျး ရှိပါသေးတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ ယာဉျစညျးကမျး၊ လမျးစညျးကမျးထိမျးသိမျးရေး အဖှဲ့ကထုတျပွနျထားတဲ့ အခကျြတှအေရ ကားမီးသေးကို ညမှောငျပွီဆိုတာနဲ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ကိုကျ ၂၀၀ အထိ မွငျနိုငျစှမျးဖွဈအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။
ကားမီးသေးက လမျးကို မွငျသာရုံသာ အောကျစိုကျထားတဲ့ မီးဖွဈတဲ့ အတှကျ တဈဖကျယာဉျမောငျးရဲ့ အမွငျအာရုံကို အနှောငျ့အယှကျမဖွဈစပေါ။
ကားမီးကွီးကိုတော့ လမျးမီးမရှိတဲ့နရောတှေ၊ မိုးသညျးထနျစှာရှာတဲ့အခြိနျ၊ မွူနှငျးတှကေခြိနျ တှမှော အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အသုံးပွုတဲ့အခါမှာလညျး တဈဖကျယာဉျကို အနှောငျ့အယှကျမဖွဈစဖေို့ သတိပွုသငျ့ပါတယျ။ ကားမီးကွီးသညျ ကားရှေ့ ကိုကျ ၃၅၀ ကနေ ၄၀၀ အထိမွငျနိုငျပါတယျ။ ကားမီးကွီးသညျ ကားမီးသေးထကျ အလငျးရောငျ ၂ ဆ ပိုလငျးပါတယျ။
အဓိကပွောခငျြတာကတော့ လမျးမီးအလငျးရောငျရှိပွီး မွငျသာထငျသာတဲ့ နရောတှမှော မီးအသေးကိုသာ သုံးပွီး တဈဖကျယာဉျကွောက ယာဉျမောငျး အနှောငျ့အယှကျမဖွဈအောငျ ကူညီပေးသငျ့တာမြိုးပါ။
တဈဆကျတညျး ပွောခငျြတာက အခုနောကျပိုငျး မျောဒယျမွငျ့ကားတှမှောပါလာတဲ့ မီးကွီးတှအေကွောငျးပါ။ ဥပမာ Alphard တို့၊ Mark X တို့မှာပါတာမြိုးတှပေါ။ HID မီးသီးလို့ချေါပါတယျ။ အရှညျကတော့ (High-Intensity Discharge) ပါ။ အဲဒီမီးလုံးတှကေ လငျးအားအတျောကောငျးပွီး ညဖကျမှာကွညျ့ရငျ အနီရောငျ အဝါရောငျ မဟုတျဘဲ အဖွူရောငျ မီးသီးကွီးတှဖွေဈကွပါတယျ။
အဲဒီမီးသီးကွီးတှေ ကြှမျးရငျ၊ ပကျြရငျ၊ ကိုယျတိုငျဖွုတျလဲတာ ပွုပွငျတာမြိုး မလုပျသငျ့ကွောငျး တဈခါတညျး အကွံပွုခငျြပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ ဒီမီးသီးတှဟော အမြားထငျသလို DC မီးသီးတှမေဟုတျဘဲ AC voltage နဲ့ အလုပျ လုပျတာမလို့ပါပဲ။ ဒီကောငျတှေ အလုပျ လုပျဖို့ ဒီမီးသီးတှရေဲ့ မီးခှကျတှေ အောကျမှာ အရပျချေါ ခြုပျဘူးလို့ချေါတဲ့ (AC to DC Converter) တှေ ပါ ပါတယျ။ လကျရှိကား ဈေးကှကျထဲမှာတော့ D2R ၊ D2S ၊ D4R ၊ D4S အမြိုးအစားဆိုပွီး အမြိုးမြိုးကှဲပွားပါတယျ။ ဒီမီးသီး ခြုပျဘူးတှကေ ထှကျတဲ့ဟာက high voltage ဖွဈပွီး ဓာတျလိုကျတဲ့ အန်တရာယျရှိနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ နောကျပိုငျး မျောဒယျမွငျ့ကားတှရေဲ့ မီးသီးတှေ ပွုပွငျမယျဆို မကြှမျးကငျြဘဲ အလှယျတကူ ဖွုတျတပျတာတှေ စမျးသပျတာတှေ မလုပျသငျ့ကွောငျးပါ။
အခုလောကျဆိုရငျ ကားမီးမွှငျ့မယျဆိုရငျ၊ ဝပျမြားတဲ့ မီးသီးတှေ သုံးမယျဆိုရငျ ဘယျလိုသုံးရမယျဆိုတာရယျ၊ အရပျထဲမှာ အပွောမြားကွတဲ့ relay ခံသုံးတယျဆိုတာ ဘာကွောငျ့သုံးတယျဆိုတာရယျကို စာဖတျသူ မိတျဆှတေို့ နားလညျသဘောပေါကျလောကျပွီလို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
ကားနညျးပညာ ဗဟုသုတမြားကွှယျဝပွီး မိမိတို့ရဲ့ကားတှမှော ကွုံတှလေ့ာနိုငျတဲ့ ဝါယာရှော့ဖွဈခွငျး အန်တရာယျမြား ကငျးဝေးကွပါစလေို့ ဆုတောငျးအကွံပွုတငျပွလိုကျရပါတယျခငျဗြာ။